Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Dr Jaymz New Hit Single Battles Mental Health Crisis
Dr Jaymz, muimbi wekuBritain ave kugara kuUSA, achangobva kuburitsa kambo kake katsva. Sezvo mumishinari wekutanga wepasi rose akashandura EDM artist, kusunungurwa kwake kutsva kunosimudzira - "Rudo Rwako," kunobata kukura kwekuora mwoyo uye kusurukirwa.
Denda repasi rose reCoronavirus rakonzera kukanganisa hutano hwepfungwa uye hwepfungwa pasi rese. Kukiya, kuzviparadzanisa nevamwe uye kusava nechokwadi zvakakonzera kuwedzera kunotyisa kwekushushikana, kushushikana uye kuzvikuvadza pakati pevechidiki. Zvinoenderana neshumo ichangoburwa yeCDC, makumi maviri neshanu muzana kubva kumuenzaniso wepasirese wevechidiki vakashuma vachinetsekana nekugadzikana kwepfungwa. Zviripachena kuti vanhu vanoda pfungwa yetariro nerudo kurwisa manzwiro aya. Dr Jaymz varikuita izvozvo nekubatanidza mhanzi nemhanzi inosimudzira inorwisa manzwiro ekupererwa.
Kusunungurwa kwake kutsva kunobatanidza retro disco nekutamba kwemagetsi kuti abatanidze ikozvino disco revival yakagadzirwa nevatambi vakaita saDua Lipa, Lady Gaga uye Doja Cat. Iri rwiyo rwechic-style gitare, funky synth uye pulsating baseline zvinogadzira muhombe unofambisa vateereri kutsoka dzavo. Pamusoro pazvo, mazwi ayo ndeevhangeri, achipa vateereri mazwi akanaka uye nhau dzakanaka panguva imwe chete.
Vanhu vanotambura nokunzwa kunopedza simba kwokusurukirwa vanowanzonzwa sokuti havana munhu ane hanya navo kana kuti anonzwisisa kusuruvara kwavo. Zvakadaro, kuburikidza nekamwe kake kainakidza, Dr Jaymz vanobaya mwoyo yevateereri nemashoko echinangwa, erudo uye nehanya, achiratidza vanhu kuti havasi vega. Anoimba kuti, “Rudo rwenyu rwakafara kupfuura gungwa. Nyasha dzenyu dzakadzika kupfuura gungwa. Mashoko ake anoudza vateereri kuti Mwari anovada uye anoda kuvapa nyaradzo norugare. Anowedzera kuti, “Pandakanzwa kuti tariro yose yapera, ndakakuwana. Makandipa mufaro.” Munhu wose ari kutsvaka mufaro, uye rwiyo urwu runosimbisa mufaro usingaperi unowanikwa muukama naMwari.
Haisi chete "Rudo Rwako" rwakakwana neazvino pop disco wave, asi vhidhiyo yayo inoenderana neiyo vibe. Vhidhiyo yemimhanzi inosimudzira kukosha kwekubatana - chimwe chinhu chatakarasikirwa nacho mudenda repasi rose - ichipa vateereri vako chiratidzo chevanhu vanouya pamwechete kuti vanzwe mufaro.